5 ထိပ်တန်း 2021 ယူကေပြန့်ပွားသောလောင်းကစားပွဲစားများ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ | ကုန်သွယ်ရန်သင်ယူပါ
ထိပ်ဆုံး ၅ ခုပျံ့နှံ့နိုင်သောလောင်းကစားပွဲများ UK - Full5Guide!
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 22 ဇန်နဝါရီလ 2021
လောင်းနိုင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခု၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုသင်ခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ငွေကြေး၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ရွှေ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ပျံ့နှံ့နေသောအလောင်းအစားပွဲစားများသည် CFD ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သို့သော်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အလုံးစုံအကျိုးကျေးဇူးမှာသင်၏အကျိုးအမြတ်အတွက်အခွန်ပေးဆောင်စရာမလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပွဲစားများကသင့်အားပိုင်ဆိုင်မှုတိုတောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကျသွားသောအခါသင်အမြတ်ရနိုင်သည်။
ထိုအရာဖြင့်သင်၏ငွေနှင့်မခွဲခွာမီကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ အမြတ်ငွေနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သို့တွက်ချက်သည်၊ အရေးကြီးသည် - ယူကေဈေးကွက်တွင်လက်ရှိအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းငါးခုကိုမည်သို့ပြန့်နှံ့နိုင်သည်၊
မှတ်ချက် - ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့မတူတာကသင့်တော်တဲ့ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုမတပ်ဆင်ထားရင်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းမှာသင့်ရဲ့လက်ကျန်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ မကျရောက်မီအလောင်းအစားများပြန့်ပွားခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
EagleFX - အကောင်းဆုံး Mobile Forex Trading Platform
အနိမ့်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Fast Order မြန်နှုန်း
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်၊ ပြန့်ပွားခြင်းသည်လောင်းခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့သောရိုးရာဘဏ္assetsာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အနာဂတ်လမ်းညွှန်ကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ CFD (ကွဲပြားခြားနားသောကန်ထရိုက်များ - ထုတ်ကုန်များ) ထုတ်ကုန်များနှင့်ဆင်တူသည်မှာပြန့်ပွားခြင်းလောင်းကစားခြင်း၌သင်ပါဝင်သောအခါသင်ပိုင်ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, သငျသညျမျှသာပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုပွင့်လင်းစျေးကွက်အတွက်သွားလိမ့်မည်သည့်လမ်းအပေါ်ထင်ကြေးနေကြသည်။
ပြန့်ပွားခြင်းဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာစရာများစွာရှိသည်။ အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမနှင့် ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်လိုက်သောစျေးနှုန်းနှင့် ဆက်စပ်၍ ပိုင်ဆိုင်မှုရွေ့လျားသည့် 'အချက်များ' အရေအတွက်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤအချက်များကိုသင်၏လောင်းကြေးဖြင့်မြှောက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရလျှင် FTSE 100 သည်စျေး ၅၀၀၀ နှင့်သင်စုစုပေါင်းပေါင် ၁၀ ပေါင်သာရှိသည်။ အကယ်၍ FTSE 5,000 သည်အချက် ၁၀၀ တိုး။ ၅,၁၀၀ သို့တိုးလျှင်၊ သင်သည်အမြတ်ငွေပေါင် ၁၀၀ (ပေါင် ၁၀ x ၁၀၀) ရလိမ့်မည်။ အလားတူစွာ အကယ်၍ FTSE 10 သည်အချက် ၁၀၀ ကျသွားလျှင်သင်£ 100 ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပျံ့နှံ့ခြင်းသည်အလောင်းအစားပြုခြင်းသည်ရိုးရာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်းများထက်များစွာ ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များစွာဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
တစ်ဖက်တွင်ပြန့်နှံ့သောအလောင်းအစားသည်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မတူသည်မှာပြန့်ပွားသည့်အလောင်းအစားအမြတ်များသည်အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ HMRC သည်လောင်းကစားကိုလောင်းကစားအဖြစ်ပြန့်နှံ့နေသောကြောင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းအားလုံးကိုသိမ်းထားနိုင်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ သင်ငွေကုန်ကြေးကျများနေသောကြောင့်သင်၏ငွေစာရင်းထက်ငွေပိုမိုရောင်းဝယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အချို့သောပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားဆိုက်များသည်သင်၏အကောင့်လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုခြင်းမပြုမီအကြွေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်။
ထို့အပြင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည့်အလောင်းအစားများကသင့်အား 'တိုတောင်း' ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဤသည်ကသင်ရွေးချယ်ခံရသောပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကိုလျှော့ချမည်ဟုခန့်မှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ရိုးရာဘဏ္sceneာရေးမြင်ကွင်းထဲမှာမရရှိနိုင်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းကစားသည်အလွန်ဆင်တူခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်လည်းအရေးကြီးသည် အနားသတ်ကုန်သွယ်သင်သည်သင်၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏အနည်းငယ်ကိုသာတင်ရန်လိုအပ်သည်။
ယူကေကုန်သည်များအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပွဲစားများ
ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားသည်အသစ်ဖြစ်နေသောသူများအတွက်ခက်ခဲသောကွတ်ကီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်၏အဓိကအကျဆုံးအကြောင်းရင်းမှာသင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လောင်းကစားပွဲစားများအသုံးပြုသည့်ပျံ့နှံ့စေသောအချက်များကိုသင်နားလည်ရန်သာမက၎င်းသည်သင်၏လောင်းကြေးနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ကြောင်းကိုလည်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် 'long' နှင့် 'တိုသော' အမိန့်များသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏အကျိုးအမြတ် (သို့) ဆုံးရှုံးမှုများကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်ပုံတို့ကိုလည်းကောင်းစွာသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။
🥇 Long နှင့်တိုတို
ရိုးရာအွန်လိုင်းပွဲစားများနှင့်မတူဘဲဖြန့်ထားသောလောင်းကစားပွဲစားများကသင့်အားရှည်လျားသော (သို့) တိုတိုသွားရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ သင်သည်ရှည်လျားစွာသွားလိုပါကသင်သည်ဝယ်ရန်အမှာစာချပေးသည်။ Layman ၏ဝေါဟာရများအရ၎င်းသည်သင်တက်နေသောတက်ကြွမှု၏စျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းများသည်နောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်မြင့်တက်သွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်ဝယ်ယူမှုအမှာစာအားဖြင့်ရှည်လျားစွာသွားလိမ့်မည်။ တစ်ခြားအဆုံးတွင်တိုတောင်းသောသူတို့သည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနေကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်တစ် ဦး ရောင်းအမိန့်အားထားလိမ့်မယ်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်များကျဆင်းနေသည့်တိုင်၎င်းသည်သင့်အားအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်တစ် ဦး သမားရိုးကျကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် သင်အစုရှယ်ယာအားလုံးကိုလုံး ၀ ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်၊ ဗြိတိသျှအမေရိကန်ဆေးရွက်ကြီးအစုရှယ်ယာပေါင် ၅၀၀ ကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါင် ၅၀၀ ကိုရန်ပုံငွေလိုလိမ့်မယ်။ အလွယ်တကူလောင်းနိုင်သောဆိုဒ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်၎င်းသည် 'အနားသတ်' ထားရန်သာလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကွာခြားသည်
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် FTSE 100 ကဲ့သို့အလွန်မြင့်မားသောအရည်အချင်းရှိလူတန်းစားအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်ကနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အလောင်းအစားများပျံ့နှံ့ခြင်းကကုန်သွယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ အထက်ပါဥပမာနှင့် ကပ်၍ ပွဲစားသည် ၂၀% လိုအပ်သည်ဟုယူဆလျှင်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏£ 20 British American Tobacco အမိန့်ကိုပေါင် ၁၀၀ ပေါင်သာတင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
မှတ်ချက်။ ။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြပါကသင်၏ပြန့်ပွားသည့်လောင်းခြင်းကုန်သွယ်မှုသည်ပွဲစားတွင်သင်အပ်နှံထားခြင်းထက်ပိုပြီးသင့်ကိုဆန့်ကျင်နေပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပွဲစားများမှလိုအပ်သောတိကျသောအကန့်များသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သာမကပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Forex နှင့် indices တို့ကဲ့သို့အလွန်အမင်းအရည်အချင်းရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများသည်အလွန်သေးငယ်သော margin ရာခိုင်နှုန်းလိုအပ်သော်လည်း cryptocurrencies ကဲ့သို့အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကများစွာတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားဝိုင်းများမှအမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းသည်အမှတ်စနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယခင်ကအွန်လိုင်း Forex ကိုရောင်းဝယ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည် 'pips' ထို့ကြောင့်၊ သင်လုပ်သော (ဆုံးရှုံးမှု) ပမာဏသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုရွေ့လျားစေသောအချက်များနှင့်မည်သည့် ဦး တည်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင် S & P 500 အညွှန်းကိန်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့
S&P 500 ၏စျေးနှုန်းကို ၂,၅၄၁ မှတ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
ကုန်သွယ်မှုပြီးဆုံးချိန်တွင် S&P 500 ကို ၂၅၇၁ မှတ်ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်
စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက် 30 မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ S&P 50 အတွက်တစ်ဒေါ်လာ ၅၀ သာပေးသည်ဆိုပါစို့။ ရလဒ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်တယ်။
ရှည်လျားတယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်လိမ့်မယ် လုပ် အမြတ်ပေါင် ၁၈၀ (အမှတ် ၃၀ မှပေါင် ၅၀)
သင်တိုတိုသွားရင်သင်၌ရှိလိမ့်မည် ပျောက်ဆုံး ပေါင် ၁၈၀ (ရမှတ် ၃၀ မှပေါင် ၅၀)
မှတ်ချက် - FTSE100 နှင့် S&P 500 တို့ကဲ့သို့စတော့ဈေးကွက်စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများကိုရမှတ်များတွင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်စတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပေါင်နှင့် pence ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအမှတ်သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ၊ Barclays ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းသည်ပေါင် ၉၇.၃၇ ဖြစ်ပါကဤအချက်သည် ၉၇၃၇ မှတ်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လောင်းကြေး၊ အမြတ်နှင့်ရှုံးငွေများကိုပြန့်ပွားခြင်းလောင်းခြင်းတွင်မည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုသင်သိပြီဆိုလျှင်ပြန့်ပွားမှုဆိုသည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန့်ပွားမှုဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရဲ့ရောင်း ၀ ယ်ဈေးနဲ့ကွာခြားချက်ပါပဲ။
GBP ရှိရွှေအစစ်အမှန်၏ရွှေစျေးမှာပေါင် ၃၀.၅ ဖြစ်သည်
ရွှေအပေါ်ဝယ်စျေး£ 31 ဖြစ်ပါတယ်
ရွှေကိုရောင်းဈေးကပေါင် ၃၀ ဖြစ်ပါတယ်
စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်မှာ ၁ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရွှေဖြန့်ခြင်းသည် ၁ ဖြစ်သည်
မှတ်မိဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အဲဒါပါ ပိုမိုကျယ်ပြန် ပြန့်ပွားခြင်း, ပိုမိုကုန်သွယ်ရန်သင့်အားကုန်ကျ။ အလားတူ ကြပ်သော ပြန့်ပွားပိုပြီးကုန်ကျစရိတ် - ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကတောင်မှချိုးဖျက်နိုင်ဖို့အနည်းဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုအမြတ်ရဖို့လိုတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်သင်ဟာ ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုကိုရွှေမှာထားတဲ့အခါ၊ သင်ဟာသူ့ရဲ့အမှန်တကယ်စျေးထက်အနည်းငယ်ပိုပေးရတာပါ။
ထို့ကြောင့်ပေါင် ၃၁.၅၀ သာရှိသောရွှေအစစ်အမှန်ကိုပေးရသောအခါပေါင် ၃၁ ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် ၀.၅၀ မှတ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုချက်ချင်းရောင်းလျှင်၊ သင်အစုရှယ်ယာပေါင်တစ်ပေါတိုင်းလျှင် ၀.၅၀ အရှုံးပေါ်လိမ့်မည်။ ဒါကအမှာစာရောင်းတာနဲ့လည်းအတူတူပဲ၊ ဒါပေမယ့်ပြောင်းပြန်ပါ။
ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းခြင်းတွင်လောင်းသည့်ကြာချိန်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကုန်ဆုံးသည်အထိသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဆက်လက်ဖွင့်နိုင်မည့်အချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်ပစ္စည်းအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် (၂) လလျှင် (၂) လကြာသည် - ရန်ပုံငွေလောင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) သုံးလတစ်ကြိမ်လောင်းခြင်း။
နေ့စဉ်ရန်ပုံငွေလောင်းကစားခြင်းဖြေ - နေ့စဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အလောင်းအစားဟာတိုတောင်းတဲ့ကာလကုန်သွယ်မှုနဲ့ပါ ၀ င်ချင်တဲ့သူနဲ့သင့်တော်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာသင်၏လက်ကျန်ငွေကိုနေ့စဉ်အဆုံးသတ်သည့်ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားပွဲစားများမှချိန်ညှိပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အနေအထားကိုဖွင့်ထားရန်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်းရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏အမြတ်အစွန်းမှစတင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းကိုသတိရပါ။
လပတ်အလောင်းအစား: နာမတော်၏ဖော်ပြချက်အရသုံးလတစ်ကြိမ်ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားသည်သုံးလကြာသည်။ ကိစ္စရပ်အများစုတွင်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုအနာဂတ်စာချုပ်ဖြင့်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာရေရှည်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်လိုသောသူများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့သင်၏ဘဏ္positionာရေးကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်အခက်အခဲမရှိဘဲသင်၏အနေအထားကိုပွင့်လင်းစွာထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Vodaphone Spread အလောင်းအစား၏ဥပမာ
ယခုတွင်သင်သည်လောင်းကစားများပျံ့နှံ့သောအခါသင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်အသုံးအနှုန်းများကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လာပါက ပို၍ ပြည့်စုံသောဥပမာကိုကြည့်ကြစို့။
လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ရောင်းဝယ်သော Vodaphone ရှယ်ယာများကိုသင်ရောင်းဝယ်ရန်ရှာနေသည်
လက်ရှိရှယ်ယာများ၏စျေးကွက်တန်ဖိုးမှာပေါင် ၁၁၉.၉၄ ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းဤအချက်သည် ၁၁၉၉၄ မှတ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။
Vodaphone ၏အစုရှယ်ယာများသည်အချက် ၅၀ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်“ ၀ ယ်ယူ” သောဈေးသည် ၁၂,၀၄၄ နှင့်“ ရောင်း” သည် ၁၁,၉၄၄ ဖြစ်သည်။
Vodaphone ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းများသည်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးမြင့်တက်နေသည်ဟုသင်ထင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ရောင်းရန်အမှာစာကို ၁၁,၉၄၄ တွင်နေရာချသည်။
သင်သည်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၂ ပေါင်လောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Vodaphone ၏ရှယ်ယာများကိုပေါင် ၁၁၇.၉၄ မှပေါင် ၁၁၇၉၄ မှတ်ဖြင့်ရောင်းချသည်။
သင်၏အကျိုးအမြတ်အတွက်သော့ခတ်နိုင်ရန်ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ပစ်ရန်သင်“ ၀ ယ်” ရန်အမိန့်ပေးရမည်။ အချက် ၅၀ ပြန့်ပွားမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ ဤအချက်သည် ၁၁,၈၄၄ မှတ်ဖြစ်သည်။
သင်ရောင်းရန်အမှာစာကို ၁၁,၉၄၄ တွင်နေရာချခဲ့ပြီးထိုနေ့နောက်ပိုင်းတွင် ၁၁,၈၄၄ တွင် ၀ ယ်ရန်အမှာစာတင်ခဲ့သည်
စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားအချက်များအတွက်ခြားနားချက် 100 ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏လောင်းကြေးသည်တစ်ပေါင်လျှင် ၂ ပေါင် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀ ကိုမြှောက်လိုက်သည်
ကုန်သွယ်မှုမှသင်၏စုစုပေါင်းအမြတ်သည်ပေါင် ၂၀၀ ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမျက်နှာကိုရိုးရာပလက်ဖောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြန့်ပွားသည့်အလောင်းအစားပွဲစားများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသော်လည်းအန္တရာယ်များမှာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်၏ရှေ့တန်းမှသင်၏အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်သင်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက်ပိုပြီးသင့်ကိုဆန့်ကျင်နေပါကထိုသို့ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်က FTSE 100 ကိုသင်ရောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ပွဲစားက 20% လောက်လိုအပ်တယ်။ သင်ရွေးချယ်သော per-per လောင်းကြေးအရပွဲစားသည်သင့်ထံမှစုစုပေါင်းပေါင် ၂၀၀ ခန့်လိုအပ်သည်။
၀ ယ်ရန်အမှာစာတစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀ ပေါင်ရှိပြီး FTSE ၏စျေးနှုန်းမှာ ၃၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် FTSE သည် ၁၈ မှတ်ကျသွားပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပေါင် ၁၈၀ (၁၈ မှတ်မှ ၁၀ ပေါင်) အထိအရှုံးပေါ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဤအဆင့်တွင်ပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအားဖျက်သိမ်းနိုင်ခြေရှိကြောင်းသိရန်အကြောင်းကြားစာပေးပို့လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ သင်ဘာမျှမလုပ်လျှင် FTSE သည်နောက်ထပ် ၂ မှတ်ကျသွားလျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ပေါင် ၂၀၀ ကျသွားသည်။ ၎င်းသည်သင်၏£2margin ကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ကုန်သွယ်မှုသည်အလိုအလျောက်ပိတ်သွားပြီးသင်£ 200 တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်အပိုပေါင် ၁၀၀ ပိုလျှံနေလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်အပိုနေရာလွတ်ပေးသည့်အတွက်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအပိုဆောင်းပေါင် ၁၀၀ သည်တစ်ပိုဒ်လျှင် ၁၀ ပေါင်ပေါ် အခြေခံ၍ နောက်ထပ် ၁၀ မှတ်၏လုံခြုံစိတ်ချရသောပိုက်ကွန်ဖြစ်သည်။
Stop-Loss ကို install နှင့်အမြတ်အမိန့်ယူပါ
အလောင်းအစားများပျံ့နှံ့သောအခါအန္တရာယ်များသည်ကြီးမားလှသဖြင့် stop-loss order ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ထိုအန္တရာယ်များကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ရိုးရာဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကဲ့သို့ပင် stop-loss သည်သင်ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်စေလိုသောစျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ဟာလေ့လာသူဖြစ်စေ၊ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်ဖြစ်စေပဲငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားလိုလျှင်ရပ်တန့်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ပြန့်ပွားသောလောင်းကစားပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုသောအခါရပ်တန့ ်၍ ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အမိန့်သည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သို့လျော့ချနိုင်ကြောင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည် BP ရှယ်ယာများပေါ်တွင် ၀ ယ်ရန်အမှာစာအမှတ် ၃၁၀၀၀ နှင့်တစ်ပေါင်လျှင် ၀.၀၀ ရှယ်ယာရှိသည်
သင်သည်သင်၏ margin ၏ 10% ကျော်ကိုမဆုံးရှုံးလိုသောကြောင့် stop-loss order ကို ၂၇၉၀၀ မှတ် (၃၁၀၀၀ မှတ်လျော့သော ၁၀%) တွင်နေရာချသည်။
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် BP ၏ရှယ်ယာများသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိရေနံစိမ်းများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများကိုစတင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
BP ၏ရှယ်ယာ ၂၄,၈၀၀ သို့ကျဆင်းသွားလျှင်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုအမှတ် ၆,၂၀၀ ကိုပေါင် ၆၂၀ နှင့်ညီမျှသည်။
သို့သော်သင်၏ Stop-loss order ကို ၂၇,၉၀၀ မှတ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အရှုံး ၃၁၀၀ မှတ်သို့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့လျှော့ချသည်။ ထို့ကြောင့်£ 27,900 အစားပေါင် ၃၁၀ ဆုံးရှုံးသည်။
အလောင်းအစားပွဲစားပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ Stop-loss အမိန့်များကိုတပ်ဆင်ရန်အရေးကြီးသကဲ့သို့ပင် ၀ င်ငွေအမြတ်ယူမှုအမိန့်ကိုထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်းသည် Stop-loss order နှင့်တူညီသည်။ သို့သော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်အမြတ်ရသောအခါကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ပစ်ချင်သောစျေးကိုသတ်မှတ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏စက်ကိရိယာနှင့်ဝေးကွာသွားသောအခါသင့်အကျိုးအမြတ်များကိုပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ပြန့်ပွားသည့်အလောင်းအစားအမြတ်များသည် ၁၀၀% သည်ယူကေအခွန်စည်းကြပ်မှုမှကင်းလွတ်သည်။ ဤသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်၊ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးအမြတ်အားလုံးသည်အခွန်ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခွဲဝေခွဲဝေမှုများသည်အမြတ်ခွန်အခွန်အတွက်ပေးဆောင်ရမည့်အပြင်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုကိုသင်ပေးဆောင်သည်ထက်ပိုရောင်းခြင်းသည်အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
သို့သော် HMRC ကလောင်းကစားခြင်းကိုလောင်းကစားအဖြစ်ပြန့်နှံ့သည်ဟုရှုမြင်သည်နှင့်အမျှလောင်းကြေးကိုလောင်းကြေးအဖြစ်မပေးဘဲသင်၏အမြတ်အစွန်းအားလုံးကိုသိမ်းထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သည့်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ဗြိတိန်တွင်ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပွဲစားကိုအသုံးပြုနေပါကဤစည်းမျဉ်းများသည်အမြဲတမ်းမတည်ရှိနိုင်ပါ။
အလွှာအလောင်းအစားများမည်သို့ပျံ့နှံ့နေသည်ကိုသင်သိရန်အတွက်ယခုသင်နှင့်သင်စာရင်းသွင်းလိုသောပွဲစားကိုစတင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ CFD နှင့်ရိုးရာအွန်လိုင်းပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် UK ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားဆိုက်များသည်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းရွေးချယ်စရာပလက်ဖောင်းများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျံ့နှံ့လောင်းကစားပွဲစားအသစ်သို့မ ၀ င်မီအောက်ပါအချက်များကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
ပြန့်ပွားမှုများ၊ အခကြေးငွေများနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကဲ့သို့သောမက်ထရစ်များကိုမစဉ်းစားမီ၊ သင်ရွေးချယ်ထားသောပြန့်ပွားခြင်းလောင်းကစားပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားရန်သေချာသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာယူကေသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်တူညီသောအမျိုးအစားတွင်လောင်းခြင်းကိုပြန့်နှံ့ခြင်းဟုသတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းသည်လောင်းကစားကော်မရှင်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေမဟုတ်ပါ။
ဘဏ္spreadာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ (FCA) သည်ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပွဲစားများကိုထိန်းချုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်၏ရွေးချယ်သောပွဲစားသည် FCA လိုင်စင်မပါရှိလျှင်လမ်းလျှောက်ရုံသာယူပါ။
စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ စွမ်းအင်များ၊ အဖိုးတန်သတ္တုများ၊ အနာဂတ်၊ ရွေးချယ်စရာများ၊ အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မှီမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်ကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၌ငွေရှာရန်ရှာဖွေနေပါက၊ သင်သည်တကယ့်ကမ္ဘာငွေသားကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အလောင်းအစားပွဲစားပွဲစားတစ် ဦး သို့ငွေအလွယ်ကူဆုံးရနိုင်သည့်နည်းမှာဘဏ်ငွေလွှဲများနှင့်အီးမေးလ်ပိုက်ဆံအိတ်များကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပံ့ပိုးထားသော်လည်းဒက်ဘစ်ကဒ်ဖြင့်ရနိုင်သည်။
၏အရွယ်အစား ပျံ့နှံ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတခုကိုရောင်းဖို့သွယ်ဝိုက်ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုပြates္ဌာန်းထားတယ်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားများကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာတွင်ပျံ့နှံ့နေသောပျံ့နှံ့မှုများကိုစစ်ဆေးပါ။
အွန်လိုင်းအားကစားစာအုပ်များနှင့်လောင်းကစားရုံများနှင့်ဆင်တူသည်မှာပျံ့နှံ့နေသောအလောင်းအစားပွဲစားများသည်သင့်ကိုမကြာခဏမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည် ဆုငှေ။ ဒီအပိုဆုဟာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်မယ့်သူတွေကိုမက်လုံးပေးအဖြစ်ကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပြီးအချို့ကုန်သွယ်ရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုရောက်တဲ့အခါရန်ပုံငွေများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယိုစီးကျွေးမွေးသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ၀ ယ်သူအသစ်များအား ၀ င်ငွေအပိုဆုကြေးကမ်းလှမ်းသည့်ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားဆိုဒ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏စတင်သောဘဏ်စာရင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ပျံ့နှံ့လောင်းကစားပွဲစားတွင်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာရန်မမေ့ပါနှင့်။ ပထမ ဦး စွာ၊ တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းနှင့်အီးမေးလ်ကဲ့သို့သောထောက်ခံမှုလိုင်းများကိုမည်သို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုကြည့်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာသုံးစွဲသူအထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုဆန်းစစ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၄/၇ ဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောပွဲစားများကို ပို၍ နှစ်သက်သည်။
အလွှာလောင်းခြင်းပွဲစားတစ် ဦး မည်သို့ပူးပေါင်းနိုင်ပုံ - တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ခန်းစာ
သင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များအတွက်မည်သည့်ပြန့်နှံ့သောအလောင်းအစားသည်ကမ်းလှမ်းခြင်း၏အသံကဲ့သို့စတင်ရန်မည်သို့လမ်းညွှန်လိုပါသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမြန်မီးအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁ - UK Spread Betting ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ပျံ့နှံ့လောင်းကစားပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာအထက်ဖော်ပြပါအပိုင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီသင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်မက်ထရစ်များစွာကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုရန်အချိန်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမျက်နှာတွင် ထပ်မံ၍ အကြံပြုထားသောပြန့်နှံ့သည့်လောင်းကစားပွဲစားငါးယောက်၏တန်ရာကိုစူးစမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ ပွဲစားများအားလုံးသည်မိမိတို့၏တင်းကျပ်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သေချာစွာစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။
ယူကေပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာလောင်းကစားပွဲစားတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးလျှင်၊ သင်အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်ငါးမိနစ်ကျော်ကြာပြီးသင့်ထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကိုသာလိုအပ်သည်။
ထို့နောက်သင်၏ဗဟုသုတနှင့်ကြိုတင်ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအချို့ကိုဖြေဆိုရန်သင့်အားမေးလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေနှင့်မခွဲခွာမီအန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
FCA နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန် UK ၌ပျံ့နှံ့ထားသောအလောင်းအစားပွဲစားများသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်ချက်ချင်းလုပ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းသင်၏အကောင့်ဖွင့်ပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း - သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ငွေထုတ်ယူသည့်အခါတွင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်)
လိပ်စာအထောက်အထား (ကုန်ပစ္စည်းငွေတောင်းခံလွှာ၊ ဘဏ်အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်စသဖြင့်)
သငျသညျအခြို့သောရန်ပုံငွေများငွေသွင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောပျံ့နှံ့လောင်းကစားပွဲစားအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီတွင်အောက်ပါထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိ:
E-ပိုက်ဆံအိတ် (Paypal နှင့် / သို့မဟုတ် Skrill)
ယခုတွင်သင်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သောငွေကြေးအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ထားသောအလောင်းအစားအကောင့်ရှိသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ယခုကုန်သွယ်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ!
သင်ကုန်သွယ်လိုသည့်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ (ဥပမာ Apple စတော့ရှယ်ယာများ)
တစ် ဦး ချင်းစီ၏ရှယ်ယာဆုံးဖြတ်ပါ
သင်၏ Stop-loss နှင့်ယူ - အမြတ်အမိန့် Set-up
ထိပ်ဆုံး ၅ ခုပျံ့နှံ့လောင်းကစားပွဲစားများယူကေ
သင်ကိုယ်တိုင်ပျံ့နှံ့နေသည့်အလောင်းအစားပွဲစားကိုရှာဖွေရန်အချိန်မရှိသလော။ သို့ဆိုလျှင်ယူကေတွင်လက်ရှိတက်ကြွနေသောကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးပြန့်ပွားနိုင်သောလောင်းကစားဝိုင်း ၅ ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော IG သည်ယုံကြည်မှုအရှိဆုံး CFD၊ Forex နှင့် online space တွင်အလောင်းအစားပွဲစားများကိုပျံ့နှံ့စေသည်။ ပလက်ဖောင်းသည်စျေးကွက် ၁၇၀၀၀ ကျော်ကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စိတ်ကူး။ ရသောပစ္စည်းအတန်းတိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
၎င်းတွင်စတော့ရှယ်ယာများ၊ သတ္တုများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ စွမ်းအင်များ၊ အတိုးနှုန်းများနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။ ပြန့်ပွားလည်းစူပါယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ USD / USD ကို ၀.၇၅ ဒေါ်လာသာရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ အစက်အပြောက်ရွှေသည် ၀.၃ pips ဖြင့်ပင်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။
IG တွင်စတင်ရန်အနည်းဆုံးပေါင် ၂၅၀ ကိုသင်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်က debit / credit card သို့မဟုတ် bank transfer ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စင်မြင့်ကို FCA နှင့်သြစတြေးလျနှင့်စင်္ကာပူတို့မှလိုင်စင်ရအဖွဲ့များကထိန်းချုပ်သည်။
Spreadex သည်ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များ၌သာမကလောင်းကစားများကိုလည်းလောင်းနိုင်သည်။ Spreadex သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကျော်ကစတင်ခဲ့ပြီး FCA ၏စည်းမျဉ်းဖြင့်ပြန့်ပွားသောလောင်းကစားမြင်ကွင်းတွင်အလွန်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
ဒီစင်မြင့်ကိုပညာရေးနှင့်သုတေသနကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်သင်စတင်ပြီးမှသာလျှင်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သင့်အနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက် ၁၀,၀၀၀ ကျော်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအကြွေးစစ်ဆေးသူများကိုသြဇာပေးသည်။
သင်၏အကောင့်ဖွင့်သောအခါသင်£ 1 ကိုသာသွင်းနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည်။ သင်လောင်းကြေးတစ်ခုလျှင် ၁၀p မှသာလောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သေးငယ်သောပမာဏဖြင့်စတင်လိုပါက site သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပြန့်နှံ့သောလောင်းကစားပွဲစားများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ပံ့ပိုးသူကိုသင်ရွေးချယ်ချင်လိမ့်မည်။ ဒီ၏ရှေ့တန်းမှမှာစီးတီးအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်၊ သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်သင်ရောင်းလိုသည်ဖြစ်စေ City Index တွင်အလောင်းအစားများပြုလုပ်ခြင်း။
ပလက်ဖောင်းသည်စျေးကွက် ၈၀၀၀ ကျော်ကိုရောင်းချပေးပြီးအဓိကကျသော FX အတွဲများ၌ပြန့်ပွားမှုနှုန်းသည် 8,000 pips သာရှိသည်။ FTSE 0.5 နှင့် Germany 100 ကဲ့သို့သောညွှန်းကိန်းများသည် ၅% မျှသာလိုအပ်သောပမာဏနှင့်အတူပလက်ဖောင်းသည် margin ဌာန၌ရက်ရောသည်။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ပေါင် ၁၀၀ မှစတင်သည်။ သင်သည်ဘဏ်စာရင်းသို့ / အကြွေးဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းမှသော်လည်းကောင်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် City Index ရှိဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသည်အလောင်းအစားများပြုလုပ်ရာတွင်ကူညီရန်သင့်အားကူညီပေးပါသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး CMC Markets သည်အွန်လိုင်း CFD၊ Forex နှင့်ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပွဲစားဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်ပြီး၎င်းသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုင်စင်များစွာရှိသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် CMC Markets သည်ညွှန်းကိန်းများ၊ Forex၊ cryptocurrencies၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရှယ်ယာများ၊ ETFs နှင့်ဘဏ္Treာရေးငွေချေးစာချုပ်များကိုပင်ထောက်ပံ့သည်။ ပွဲစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်သဘောကျတာကအဆင့်မြင့်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်ပုံမှန်၊ နောက်တွဲရှိခြင်းနှင့်အာမခံသော stop-loss အမိန့်များအပြင်အမြတ်ယူရန်အမိန့်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ပျံ့နှံ့နိုင်သည့်အလောင်းအစားများ၏အန္တရာယ်များကိုအလိုအလျောက်နည်းလမ်းဖြင့်လျှော့ချစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်လောင်းကစားများကိုပြန့်နှံ့ရန်အသစ်ဖြစ်နေသေးပြီးစူပါနိမ့်လောင်းကြေးများနှင့်စတင်လိုပါက FXCM ၏ကောင်းကျိုးများကိုစူးစမ်းလေ့လာသင့်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာပွဲစားသည်သင်အားအချက်တစ်ချက်လျှင် ၇ မှတ်သာရှိသည်။
သင်ပိုမိုအဆင်ပြေလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပျံ့နှံ့သည့်လောင်းကစားပွဲစားသည်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ၂: ၁ မှ ၃၀: ၁ ကြားတွင်ရှိသည်။ သင် FXCM ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်၎င်း၏ဇာတိမိုဘိုင်းအက်ပ်မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
ပြန့်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အတော်အတန်ကွဲပြားသည်။ ဥပမာ USD / USD ငွေကြေးစုံကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်လျှင် ၀.၆ သာပြန့်ပွားနိုင်သည်။ သို့သော် FTSE ၁၀၀ စတော့များများအတွက်ငွေပိုပေးရလိမ့်မည်။
အချုပ်အားဖြင့်၊ ပြန့်ပွားခြင်းသည်ရိုးရာ Forex၊ CFD သို့မဟုတ်စတော့ပွဲစားများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ သငျသညျထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြတ်ပြီးကုန်သွယ်မှုရေ - တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားမှာနေရာချနိုင်စွမ်းရှိသည်သာမက, သင်၏အမြတ်အစွန်းအားလုံးအခွန်လွတ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်သင့်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအား shorting လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်စျေးကွက်များကျဆင်းသွားလျှင်ပင်အမြတ်အစွန်းများများရနိုင်သည်။
သို့သော်ပြန့်ပွားခြင်းလောင်းခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့်သင်ကသြဇာသက်ရောက်နိုင်သောဘဏ္derivာရေးဆိုင်ရာအခွန်များနှင့်ထိတွေ့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ margin ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးစွန့်စားရသည့်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်သင့်လျော်သော stop-loss order များကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ပါ။
ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းခြင်းဆိုသည်မှာရွှေ၊ ရေနံသို့မဟုတ်စတော့များကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏အနာဂတ် ဦး တည်ရာကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့်သင်အမြတ်ရတယ်၊
သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပြန့်ပွားသည့်လောင်းကြေးပွဲစားပေါ် မူတည်၍ အလွန်ကွဲပြားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမှန်တကယ်သေးငယ်သည့်လောင်းကြေးများနှင့်စတင်ရန်ကြိုးစားနေပါကပွဲစားအချို့သည်သင့်အား£ 50 မှသာငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပြန့်ပွားသည်ပစ္စည်းတစ်ခု၏“ ၀ ယ်ခြင်း” နှင့်“ ရောင်း” စျေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားကွာဟချက်သည်လောင်းကစားပွဲစားများကငွေရှာပုံကိုဖြစ်သည်။
ပြန့်ပွားလောင်းကစားပွဲစားသည်ဗြိတိန်ကုန်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဆန္ဒရှိပါက၎င်းကိုဘဏ္Conာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာ (FCA) မှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရမည်။
ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပွဲစားများသည်သင်ကုန်သွယ်မှုပြုသည့်အခါသင်လောင်းကစားနေသောပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအားဖြင့် (၈၀% ဆိုပါက) ဆန့်ကျင်ပါကပွဲစားသည်သင့်အားအနားယူခေါ်ဆိုရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အပိုထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေများကိုမထည့်သွင်းပါကသင်၏အမှာစာသည်ဖျက်သိမ်းခံရနိုင်သည်။